Baakadaha Eco-si xor ah oo midabaysan oo dabool leh oo dabool leh oo dabool leh astaanta aluminium-bireedka koobabka qaxwada ee la tuuro oo madhan
Khudaarta (hpmc) kaabsal
Kaabsoosha Daawada adag ee Degdega ah
Kaabsalka caafimaadku wuxuu ka samaysan yahay HPMC, nooc ka mid ah waxyaabaha khudradda ah oo aan xayawaanku xor ahayn.
Qoyaanka Hoose: Waxay ku habboon tahay in la buuxiyo taas oo ay fududahay in la nuugo qoyaanka iyo/ama ka falcelinta nuxurka qoyaanka.
Degganaansho: Ma jirto falcelin isku-xidhka sababta oo ah xasillooni sare. HPMC waa nooc ka mid ah cellulose qudaarta oo aysan ku jirin amino acid
. Bari in lagu kala tago waqti gaaban si loo sii daayo walxaha gudaha ku jira.
Hantida & Bixinta
Kaabsoolka Gelatin waxaa laga yaabaa inuu ku xumaado heerkulka sare ama qoyaan sare. Waa la aqbali karaa dhammaan diimaha oo ay ku jiraan Masiixiyadda, Budhiism -ka iyo Muslimka.HPMC ayaa si ballaaran loogu qaatay soo -saarka iyo baakadaha dawooyinka, waxyaabaha la isku qurxiyo iyo daawooyinka daryeelka caafimaadka.
Waxaa la aasaasay 2004, oo leh meesha ugu habboon ee Yantai Haiyang Aagga Horumarinta Dhaqaalaha iyo Teknolojiyadda ee bariga Shandong Peninsula iyo xeebta waqooyi ee badda huruudda ah, Yantai Oriental Pharmacap Co., Ltd. waa shirkad farsamo sare oo casri ah oo ku hawlan & D, soo -saarka iyo iibinta kaabsoolka dhirta.
Iyada oo leh aag dhan 60,000 mitir murabac, shirkaddu waxay ku takhasustay soo saarista kaabsoosha dhirta HPMC oo leh HPMC sida alaabta ceeriin ee ugu weyn. Waxaan hadda nahay mid ka mid ah soosaarayaasha kaabsoolada godan ee leh xuquuqda hantida aqooneed ee madaxbannaan ee Shiinaha sidoo kale waxaan nahay hoggaamiye warshadaha kaabsal warshad ee Shiinaha
Hore: Tayo badbaado leh oo caafimaad leh oo deg deg ah oo kala diris ah oo buuxisa heer sare oo buuxinaya kaabsal qudaar ah oo kaabsal probiotic ah
Xiga: Heerka buuxinta sare ee kaabsoosha cad cad
Cabbirada Kaabsoolada Maran
Kaabsal Cellulose Khudaar ah
Kiniinka Kaabista Khudaarta
100%BSE/TSE HPMC lacag la'aan ah/Khudaar cagaaran oo madhan c ...
Midabka daabacaadda kartoo buluug cad hufan ...
Dabiiciga HPMC khudaarta kaabsoolada madhan caafimaad ...
alaab -qeybiye casaan cad HPMC capsul madhan ...
Kaabsal Faaruq ah oo Khudaar Culus ah oo Khudaaryahan ah
Cabbirka 00 HPMC Kaabsoosha Khudaarta Caddaanka ah ee Madhan Cu ...